Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Angel Hotel any Palestine dia mampiantrano vahiny 40 nozazaina quarantine ka misy amerikana 14
Farafahakeliny olona 40 no naverina karantina ho an'ny tenany tao amin'ny trano fandraisam-bahiny palestiniana akaikin'i Betlehema, amoron'i West Bank, noho ny fihanaky ny virus coronavirus. Ahitana teratany amerikana 14 izy ireo, ary vahiny sy mpiasa Palestiniana manodidina ny 25 ihany koa.
Ny Hotely Angel, ao amin'ny ankamaroan'ny Christian Beit Jala, eo andrefan'ny tanàna izay voalaza fa nahaterahan'i Jesosy, no nahitana olona fito voan'io virus io, ary izy ireo no tranga voalohany fantatra tao amin'ny Fahefana Palestiniana, raharaha iray izay nampahafantarina ny besinimaro ny Alakamisy maraina.
"Ao anaty hotely izaho sy ny mpiasa ao amiko," hoy i Maryana al-Arja, mpitantana tamin'ny The Media Line.
"Niala ny trano fandraisam-bahiny ny Amerikanina androany maraina, saingy naverin'ny Polisy misahana ny fizahan-tany Palestiniana izy ireo satria tsy afaka nahazo toerana [trano fandraisam-bahiny] hafa" tao amin'ny faritr'i Betlehema, hoy izy. "Ny olona fito izay voa na ahiahiana ho voan'ny aretina dia ao anatin'ny hotely."
Nilaza izy fa any amin'ny efitrano manokana ny mpitsidika ny hotely rehetra ary eo ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana PA mba hanao fandaharana amin'ny fitondrana azy ireo any amin'ny fitsaboana.
“Fantatry ny [vahiny] amerikana ny zava-misy ary mifandray amin'ny masoivohon'ny fireneny izy ireo,” hoy hatrany i Arja. “Nangataka ny hametrahana karantina mandritra ny 14 andro ny manampahefana israeliana alohan'ny hidirana amin'ny Isiraely. Hatreto dia mbola tsy nisy santionany nalaina tamin'ny Amerikanina. Miantso ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana izahay mba hampahafantatra anay ny drafitr'izy ireo. ”
Ny minisiteran'ny fiarovana israeliana dia nandidy ny fampitsaharana ny fiampitana avy any amin'ny faritra mandrapahatongan'ny fampandrenesana fanampiny.
17 izao ny tranga marobe momba ny virus coronavirus any Israel, izay namoahana fepetra henjana amin'ny ezaka hampijanonana ny fiparitahana.
Ireo teratany vahiny tonga avy any amin'ny firenena maratra mafy any Azia sy Eropa dia tsy mahazo miditra any Isiraely, raha ny Israeliana miverina avy amin'ireo firenena ireo kosa dia halefa any amin'ny karantina. Hatreto dia tombatombana fa olona manakaiky ny 100,000 ao Israel no ao anaty quarantine ampiharina.
Loharanom-baovao iray tao amin'ny hotely tao Beit Jala no nilaza tamin'ny The Media Line tamin'ny alàlan'ny antso an-tariby fa misy ny "fangorohoroana, fikorontanana ary tahotra" noho ny tsy fahampian'ny fampahalalana.
“Tsy nisy olona avy amin'ny [Minisiteran'ny fahasalamana PA nifandray taminay; mahazo vaovao amin'ny media sosialy izahay [na dia] tsy azo itokisana aza ny fampahalalana amin'ny tambajotra sosialy ary manahy ny olona, ​​”hoy ny loharanom-baovao.
Olona iray hafa tao no nilaza tamin'ny The Media Line fa mihoatra ny indray mandeha dia tsy maintsy nampitandrina ny olona niditra tao amin'ny hotely izy mba hiala. Nanampy izy fa ny tobin'ny polisy PA mijoro ampitan'ny arabe dia tsy nanao ezaka mihitsy hanakanana ny olona tsy hiditra ao amin'ilay toerana.
"Tsy voaisy tombo-kase tsara ny toerana," hoy ny loharanom-baovao iray hafa tao amin'ny hotely The Media Line.
"Talohan'izay dia nisy olona niditra hitsena ny namany ao anaty trano fandraisam-bahiny izay ambany kararantine, ahoana no nahafahany niditra tao amin'ilay hotely nefa tsy nosakanany?" nitohy ny loharano. “Tsy mbola nisy fanafody fitsaboana toy ny sarontava tarehy nentina teto aminay. Tsy mbola nisy sakafo nentina teto amintsika. Misy olona 40 eto. Nolazaina izahay fa hitokana irery ireo olona fito ahiahiana ho voan'ny coronavirus. Raha miala amin'ny hotely ny iray amintsika, dia handoto ny tanàna iray manontolo isika. ”
Ny Media Line dia nahatratra an'i Mohammad Awawdeh, mpitondra tenin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana PA, izay nilaza fa ny minisitera dia "miasa haingana sy haingana araka izay tratra mba hitsapana ny rehetra ary hanome valiny mazava." Ny mpitondra tenin'ny minisitera iray hafa, Dr. Dhareef Ashour, dia namoaka fanambarana ny alakamisy hariva teo izay nanakiana mafy ny olona miresaka momba izany amin'ny sehatra media sosialy.
"Manana mpanao gazety Palestiniana efatra tapitrisa isika izao ao amin'ny media sosialy, samy manana ny fandaharam-potoanany sy ny tsikera momba ny fomba hitantanana ny krizy," hoy i Ashour.
Ny PA dia nanomboka nanaparitaka otrikaretina otrikaretina manerana ny kianjan'i Manger any Betlehema ary voalaza fa nanidy ny Church of the Nativre hatramin'ny fampandrenesana fanampiny.
Ny PA ihany koa dia nanendry ny oniversite Istiqlal ao Jeriko ho toerana misy ny quarantine, zavatra iray izay nanakorontana ny mponina ao an-toerana, am-polony no voalaza fa nanakorontana teny an-dalambe, nanidy ny vavahady fidirana mankamin'ny tanàna avaratry ny Ranomasina Maty.
Ireo mpikarakara, takatry ny The Media Line fa avy amin'ny antoko Fatah mahazatra an'ny filohan'ny PA Mahmoud Abbas, dia mitaky ny olona voamarina fa manana coronavirus mijanona amin'ny toerana nahitana azy.
Ny iray tamin'ireo mpanakorontana dia nilaza tamin'ny The Media Line: "Andraikitry ny Minisiteran'ny Fahasalamana ny miantoka toerana azo antoka ho an'ny tranga tsirairay satria mitondra azy ireo dia mampidi-doza ny fahasalaman'ny mponina hafa."
Abbas dia nanambara fa misy fepetra maika mandritra ny iray volana any amin'ny faritany palestiniana rehetra satria voan'ny virus coronavirus.
Loharanom-baovao iray tany Ramallah no nilaza tamin'ny The Media Line fa tezitra tamin'ny governoran'i Betlehema ny mpitondra Palestiniana tamin'ny fomba nitantanany ny toe-javatra.
"Ny filoha [Abbas] dia mihevitra ny hanala ny governoran'ny andraikiny," hoy ny loharanom-baovao.
by Mohammad al-Kassim / Ny tsipika media